U-Ulrich Zwingli: Umfanekiso oPhambili kwiNguqulelo yamaProtestanti
U-Swiss Reformer Ulrich Zwingli Ukholelwa ukuba iBhayibhile yiGunya eliQinene
U-Ulrich Zwingli akafane athole i-credit efanelwe kwiNguqulelo yamaProtestanti , kodwa wayephila ngexesha likaMartin Luther kwaye walwela utshintsho nangaphambi kokuba uLuther enze.
UZwingli, owayengumbingeleli wamaRoma Katolika kwisixeko saseSwitzerland-umbuso waseZurich, wayechasa ukuthengiswa kweempazamo, ukuxolelwa kwamaKatolika okufuneka ukuba akhulule umphefumlo womntu kwi-purgatory . Kwi-theology yamaKatolika, i-purgatory yindawo yokuqala apho imiphefumlo iya kuhlambuluka ngaphambi kokungena ezulwini .
Bobabini uZwingli noLuther babenobundlobongela obukhulu ekusebenzeni, apho amagosa amaKatolika athengisa amaxwebhu okunyanzela ukunyusa imali ebandleni.
Iminyaka ngaphambi kokuba uLuther ahlasele i- Theses , 95 uZues , uZwingli wagxeba imfundiso eSwitzerland. UZwingli waphinde waxhatshaza ukusetyenziswa kwabaseSwitzerland ukuba bakhonze kwiimfazwe zecawa, okwenza ibandla lamaKatolika licebile kodwa labulala amadoda amaninzi.
Abanye bakholelwa ukuba uZwingli wayenomhlobo wokuvuswa xa ebethelwa sisibetho ngo-1520. Phantse i-third of the population of Zurich, kodwa uZwingli ngandlela-thile waphila. Emva kokuba abuyele, uZwingli walwela inkolo elula: Ukuba ayifumaneka eBhayibhileni, ungakholelwa kwaye ungenzi.
Ulrich Zwingli Akavumelani noLuther
Njengoko uLuther wayekhokela ukulungiswa eJamani kwiminyaka ye-1500, uZwingli wayephambi kweSwitzerland, eyakhiwa ngamadolophu amancinci abizwa ngokuba ngama-cantons.
Ukuguqulwa kwezenkolo eSwitzerland ngelo xesha kwagqitywa ngabaomantyi basekuhlaleni, emva kokuva iingxoxo phakathi kwabaguquli kunye nabameli becawa yamaKatolika.
Abaomantyi babenokhetho lokuguqula.
U-Ulrich Zwingli, umfundisi wecawa waseZurich, wayechasene no-clerical belial and fasting during the Lent . Abalandeli bakhe babedla ngokukrakra esidlangalaleni ukusabalalisa ngokukhawuleza! Ngowe-1523, izifanekiso kunye nemidwebo kaYesu Kristu , uMariya kunye nabangcwele basuswa kwiicawa zendawo. IBhayibhile yanikwa kuqala kwimithetho yecawa.
Ngomnyaka olandelayo, ngo-1524, umhlolokazi otshata esidlangalaleni u-Anna Reinhard, owayenabantwana abathathu. UZwingli uthe wayemtshatile ngo-1522 kodwa waqhubeka eyimfihlo ukuze agweme ukuhlaselwa; Abanye bathi bahlala ndawonye kuphela. Esi sibini ekugqibeleni saba nabantwana abane. Ngo-1525, uZurich waqhubeka nokuguqulwa, ukuphelisa ubunzima nokuyifakela ngenkonzo elula.
Ukuze uzame ukuhlanganisa iSwitzerland neJamani phantsi kwenkqubo yonqulo enye, uFilipu waseHesse waqinisekisa uZwingli noLuther ukuba bahlangane eMarburg ngo-1529, kwinto eya kuthiwa yi-Marburg Colloquy. Ngelishwa, abaguquleli ababini babekho iingxaki ngokubhekiselele kwinto eyenzeka ngexesha lesidlo seNkosi .
ULuther wayekholelwa amazwi kaKristu, "Lo ngumzimba wam" wawuthetha ukuba uYesu wayekho ngexesha le-sakramente yobudlelane. UZwingli uthe eli binzana lithetha "oku kuthetha umzimba wam", ukuze isinkwa newayini zifaneke nje. Baye bavumelana ngezinye iimfundiso ezininzi ngexesha leenkomfa, ukusuka kuBathathu Emnye ukuya kulungiswa ngokholo kwinani leemakramente, kodwa babengenakuhlangana ndawonye kwiintlanganiso. ULuther wabika ukuba akazange avumise isandla sikaZwingli ekupheleni kweentlanganiso.
Ulrich Zwingli Ufumanisa iBhayibhile
U-Ulrich Zwingli wakhulela kwiminyaka apho iikopi zeBhayibhile zazingavamile.
Wazalelwa ngo-1484 eWoldhaus, wayeyindodana yomlimi ophumelelayo. Waye kwiiyunivesithi eVienna, eBerne naseBasel, efumana i-BA degree ngo-1504 kunye ne-MA yakhe ngo-1506.
Wanyulwa ngumfundisi wamaKatolika ngo-1506 waza wathandwa ngumsebenzi wase-Dutch u-Erasmus waseRotterdam. UZwingli wathola ikopi ye-Erasmus yesiLatini inguqulelo yeTestamente eNtsha waza waqalisa ukuyifunda ngokuzikhutheleyo. Ngo-1519 uZwingli wayeshumayela kuyo rhoqo.
UZwingli wayekholelwa ukuba ezininzi zeemfundiso zeCawa yamaKatolika azizange zibe nesiseko kwiZibhalo. Kwakhona wabona ukuba ekusebenzeni kwakukho ukusetyenziswa kakubi kunye nenkohlakalo. ISwitzerland ngosuku lukaZwingli lwamukelwa ukuguqulwa, kwaye wayeva ifundiso kunye necawa kufuneka ihambisane neBhayibhile ngokusemandleni.
Utshintsho lwakhe lwalufunyenwe kakuhle kwimozulu apho amazwe amaninzi ayezama ukuphuma phantsi kolawulo lwezopolitiko lwamaKristu.
Le ntshutshiso yezopolitiko yakhokelela kwimibutho eyafaka amaqhekeza amaKatolika aseSwitzerland ngokumelene namanxiwa awo angamaProthestani. Ngomnyaka we-1531, iinqanawa zamaKatolika zahlasela iProstestant Zurich, eyaxatyiswa kwaye yahlulwa kwi-Battle of Kappel.
U-Ulrich Zwingli wayejoyine amajoni aseZurich njengomfundisi. Emva kwemfazwe, isidumbu sakhe sathotywe, sitshisa, sazingcoliswa ngumbombo.
Kodwa uguquko lukaZwingli aluzange lufe naye. Umsebenzi wakhe waqhutyelwa kwaye wandisa ngeprotege uHeinrich Bullinger kunye nomguquleli omkhulu waseJeneva uJohn Calvin .
(Imithombo: ReformationTours.com, ChristianityToday.com, HistoryLearningSite.co.uk, Christianity.com, kunye neNewWorldEncyclopedia.org)
UMnuz Donnie McClurkin Biography
Iimidlalo zamaKristu eziphezulu zezingane
Ukubeka i-Altare yakho yaseBabon
Inkcazo ye "Khiya ixesha" kwiimipu
Ukusebenzisa Imisebenzi yoLwimi ukuFunda nokufundisa isiNgesi
Ukulinganisa i-Beam's Beam
Iingelosi zeBhayibhile: UIsaya ubona uSeraphim eZulwini Unqula uThixo
Pro Skater uPaul Rodriguez
Ziziphi iiFhysicists ezibhekiselele kwiIyunivesithi ezifanayo